आखिर जे भनेका थिए त्यहि भयो, आफ्नो मृ’ त्युको बारेमा ऋषि कपुरले पहिलेनै यस्तो भनेका थिए जुन कुराले सबैलाई चकित बनायो ! – Everest Pati
आखिर जे भनेका थिए त्यहि भयो, आफ्नो मृ’ त्युको बारेमा ऋषि कपुरले पहिलेनै यस्तो भनेका थिए जुन कुराले सबैलाई चकित बनायो !
बलिउडका दिग्गज कलाकार ऋषि कपुरले अप्रिल ३० तारिखमा मुम्बईको एक अस्पतालमा अन्तिम सास फेरे । उनी करिब दुई वर्षदेखि क्यान्सरसँग जुधिरहेका थिए । ऋषि कपुरको निधनपछि पूरा बलिउड इन्डष्ट्रि शोकमा डुबेको छ । यता उनको पुरानो ट्वीटमा पनि मानिसहरुको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । यसमा उनले आफ्नो निधन बारे एउटा कुरा भनेका थिए जुन वास्तविकतामा परिणत भयो ।
लगातार थुप्रै ट्वीट गरेका थिएः
वास्तवमा सन् २०१७ मा नायक विनोद खन्नाको निधनपछि उनको अन्तिम संस्कारमा निकै कम मानिस पुगेका थिए । यसबाहेक नयाँ पुस्ताका कुनै पनि नायक नायिकाको उपस्थिती थिएन । यो कुरामा ऋषि कपुर नयाँ पीढिमाथि भड्किएका थिए । उनले लगातार थुप्रै ट्वीट गरेका थिए ।
ऋषि कपुरले ट्वीट गरेका थिए, ‘लाजै लाग्दो ! नयाँ पुस्ताका एकजना पनि विनोद खन्नाको अन्तिम यात्रामा पुगेनन् । जबकी उनी ती व्यक्तिहरुसँग पनि काम गरिसकेका थिए । कम्तीमा इज्जत गर्न त सिक्नुपर्छ ।’
ऋषि कपुरले अर्को एउटा ट्वीटमा भनेका थिए, ‘यस्तो किन ? म र मपछि पनि । म मर्नेबेलायमा यसका लागि तयार हुनुपर्छ । कसैले पनि मलाई काँध दिनेछैनन् । अहिलेका कथित स्टार्ससँग म निकै रुष्ट छु ।’
ऋषि कपुरले अर्को ट्वीटमा लेखेका थिए, ‘रिस उठेको छ । हिजो राती प्रियंकाको पार्टीमा धेरै चम्चेहरु देखिएका थिए । तर विनोद खन्नाकोमा निकै कम मानिस थिए । यी सब कुरा प्रति म एकैदम रिसाएको छु ।’
लकडाउनमा भयो ऋषि कपुरको निधनः
ऋषि कपुरको निधन देशमा लकडाउनको नियम लागू भइरहेका बेला भयो । यसै कारण अन्तिम संस्कारमा २० भन्दा बढी व्यक्तिको उपस्थिती हुन सकेन । उनको अन्तिम संस्कारमा ऋषि कपुरको परिवारका सदस्य र नजिकका आफन्तमात्र समावेश भए । त्यसैले विनोद खन्नाको निधनका बेला भनेको कुरा साँचो भएको छ ।
जंगली च्याउ खाँदा आमा छोरीको निधन, सासु र देउरानी बिरामी